Igbọ elu Samui Hụrụ Ndị Njem Nlegharị Anya Mba Nile Kemgbe Mkpọchi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Igbọ elu Samui Hụrụ Ndị Njem Nlegharị Anya Mba Nile Kemgbe Mkpọchi
Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Nabata na ọdụ ụgbọ elu Samui
Ndị otu nke ndị mba ọzọ rutere n'ọdụ ụgbọ elu Samui na Koh Samui na Thailand n'okpuru ọrụ Samui Plus Model.
Ihe oru ngo a bu Koh Samui, Koh Phangan, na Koh Tao agwaetiti nke Surat Thani.
Ndị njem niile gafere usoro ọrụ maka njem na ihe ahụike.
A ga-ekewapụ ndị ọbịa ahụ ụbọchị 7 na hotels Kwesịrị Ekwentị Mpaghara maka ụbọchị 3 izizi wee nwee ike ịga njem n'okporo ụzọ emechiri emechi mgbe ahụ.
Otu ìgwè nke ndị ọbịa si mba ọzọ gụnyere ihe dị ka YouTubers metụtara ndị njem nleta 10 na ndị na-ede blọgụ sitere na mba Asia na Europe nke ndị njem njem nleta nke Thailand (TAT) kpọrọ.
Nabata ndị ọbịa, bụ Thanet Phetsuwan, osote Gọvanọ nke Marketing Communications na Tourism Authority nke Thailand. Ndị njem ahụ niile nwere usoro ọrụ ọkọlọtọ (SOP) nke kpuchiri njem ha na ahụike ha, ka o kwuru.
Dị ka Maazị Thanet si kwuo, ndị ọbịa ahụ ga-anọ na họtel Area Quarantine (AQ) maka ụbọchị 3. Enwere ụlọ nkwari akụ iri na itoolu nwere ihe dị ka ọnụ ụlọ 19 na-enye ọrụ a.
Site na ụbọchị 4 ruo ụbọchị 7, ha nwere ike ịga njem na "Sezọ Akara Aka" na ụlọ ọrụ ndị na-eme njem elekere maka ọkọlọtọ Samui Plus.
Samukpụrụ Samui Plus agaghị enwe ike ịtụ anya ọtụtụ ndị ọbịa dịka ndị nọ na ọrụ Phuket Sandbox mana ọ gwara mba ụwa na Koh Samui na agwaetiti ndị dị nso dị njikere ịnabata ndị njem mba ụwa ma kwado nchekwa ha, Maazị Thanet kwuru.
O kwuru na usoro ahụike nke Samui Plus Model siri ike karịa nke Phuket.
N'okpuru Samui Plus Model, ndị njem nlegharị anya na ọgwụ mgbochi nwere ike ide akwụkwọ njem n'okpuru usoro Akara Akara ka emepere ndebanye maka asambodo nnabata (COE) na Mọnde, Julaị 12, 2021.
A chụpụrụ Washington DC Capitol Hill mgbe…